A na-emelite Google Classroom na ọkwa ndị ọzọ, ọrụ omenaala na ndị ọzọ | Gam akporosis
Imeliputa klaasị Google na amamọkwa ndị ọzọ, ọrụ omenaala na ndị ọzọ
Classlọ Akwụkwọ Google bụ ngwa agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ejirila ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ rụọ ọrụ gburugburu ụwa. Ọ bụ ọrụ ọgbara ọhụrụ, nke igwe ojii na-akwado ma na-eji ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi, nke emelitere ugbu a iji tinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụụ dị mkpa.
N'etiti atụmatụ ọhụrụ ndị a, na mgbakwunye na ndozi nke ahụhụ na mmelite arụmọrụ n'ozuzu, Google Classroom agbakwunyere nkwado maka ọrụ ọrụ omenala, gbasaa ọkwa, ma melite API maka ndị mmepe.
1 Classlọ Akwụkwọ Google na-eme ka ọ dịkwuo mma mmụta
1.1 Ọrụ dị mfe ma dị mfe
1.2 Andma ọkwa dịgasị iche iche
1.3 Nyocha na nyocha dị mma
1.4 Ndozi API maka ndị mmepe
Classlọ Akwụkwọ Google na-eme ka ọ dịkwuo mma mmụta
N'ihi ọganihu nke teknụzụ na ngwa ya na-aga n'ihu na mpaghara agụmakwụkwọ, agụmakwụkwọ na-aga n'ihu n'ụzọ dịkarịsịrị anya (ọ bụ ezie na akụkụ a dabere nke ukwuu na mba anyị nọ na ya), yabụ klaasị Google na-emeziwanye njirimara na ọrụ ya ihu ọma nke omume ahụ.
Ọrụ dị mfe ma dị mfe
Site na mmelite ohuru ahụ, klaasị Google na-abịarukwu nso na agụmakwụkwọ nke ahaziri iche, ma ugbu a na-enye ndị nkuzi ohere ikenye ụmụ akwụkwọ ọ bụla na otu ụmụ akwụkwọ ihe omume ụlọ akwụkwọ na - eme n’ụlọ dị oke ọsọ ma dịkwa mfe. Site na ndabara, mgbe onye nkụzi mepụtara ajụjụ, ọrụ ... na menu ndọpụta, a họpụtara klas niile, agbanyeghị, ọ ga-ezuru ịhapụ nhọrọ a ka ndị nkuzi nwee ike ịhọrọ ụmụ akwụkwọ akọwapụtara nke ha ga-ekenye oru.
Anyị maara na klaasị niile dabara adaba anaghị egbo mkpa ụmụ akwụkwọ […]. Malite taa, klaasị Google na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị nkuzi inye ndị ụmụ akwụkwọ na otu otu ọrụ dabere na mkpa ha pụrụ iche. Ka ha na-eke ihe omume, biputere ha, ma ọ bụ jụọ ha ajụjụ, ndị nkuzi nwere ike họrọ ịkesa ya na klaasị niile ma ọ bụ naanị maka ụmụ akwụkwọ.
N'ime klaasị ọhụrụ Google, ndị nkuzi nwere ike ekenye ihe aga-eme n'otu n'otu na n'ụzọ dị mfe karị ma dịkwa mfe
Andma ọkwa dịgasị iche iche
Klaasị nke Google enweela ọtụtụ ọkwa dị oke mkpa maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi, agbanyeghị, yana mmelite a na nso nso a, ọrụ ahụ gụnyere ọkwa ọhụụ nke ahụ ga-eme ka ọ dịrị ndị nkuzi mfe ịkọwapụta mgbe e nyefere ha ihe ka ha dechara oge ha ga-arụ ọrụ ma ọ bụ mgbe a ga-ekenye ha ọrụ ndị gara aga.
Nyocha na nyocha dị mma
Ihe niile metụtara ọnụọgụ na nyocha ka mma. Klaasị nke Google etinyela mgbanwe ndị ọzọ na akwụkwọ ọhụụ nke ebumnuche ha abụghị nke ọzọ nyekwuo ndị nchịkwa ụlọ akwụkwọ data na ọnụ ọgụgụ ka mma. Kpọmkwem, ugbu a ọnụ ọgụgụ banyere arụmọrụ zuru oke nke klaasị na banyere ịmepụta akwụkwọ ga-esonye na akụkọ sitere na ngalaba nchịkwa. Ọzọkwa, Google ekwuputala na ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mpaghara a ma na ụdị akụkọ ọhụrụ ga-esonye n'ọdịnihu.
Ndozi API maka ndị mmepe
Dị ka ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ, Google Classroom nwekwara API nke na-enye ndị mmepe nke atọ ohere ịmepụta ngwa nwere ike ijikọ na ọrụ ndị klas na-enye. Ihe ohuru na oru ohuru na Google Classroom API ga enye oru di elu nke oru inweta ngwa ha, gụnyere ịgbakwunye ihe na ọmụmụ ma ọ bụ ihe ngosi ụmụ akwụkwọ na imezigharị usoro ọmụmụ dị ugbu a.
Klas nke Google bụ ọrụ emelitere mgbe niile gụnyere ọtụtụ ọrụ na atụmatụ dị ka ndị ewepụtara ugbu a:
Anyị na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ na klaasị ugboro ugboro. Na nke a a kọwapụtara nkọwapụta ọhụụ ọhụụ niile ma jikọtara njikọ iji mụtakwuo otu esi eji ha na klaasị. Lelee peeji a kwa ọnwa iji hụ ihe dị ọhụrụ.
Ozi ndị a adịlarị na Google Classroom, ma na ntanetị ya na nsụgharị ya maka ngwaọrụ mkpanaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Imeliputa klaasị Google na amamọkwa ndị ọzọ, ọrụ omenaala na ndị ọzọ
HTC U Ultra na U Play bụ ndị ọchịchị nwere atụmatụ pụrụ iche yana nkọwa dị iche iche
Usoro ngosi Nougat bụzi ihe achọrọ maka OEM